Margarekha » संवैधानिक इजलासमा को–को न्यायाधीश परे ?
संवैधानिक इजलासमा को–को न्यायाधीश परे ?
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित दायर गरिएका सबै रिटको सुनुवाइ आज एकसाथ संवैधानिक इजलासमा हुँदैछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।
बुधबार राणाको एकल इजलासले एक दर्जन रिटलाई सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो। संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक विवादका मुद्दामा सुनुवाइ व्याख्याका लागि प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश उक्त इजलासमा रहने प्रावधान छ।
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीश हुन्छन्। संवैधानिक इजलाशका तीनजना न्यायाधीशको बहुमतले मुद्दा फैसला गर्ने कानुनी प्रावधान छ। अब संवैधानिक इजलासमा पक्ष विपक्षको सुनुवाइपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्णय रोक्ने वा नरोक्ने विषयको छिनोफानो हुनेछ। रिट निवेदकले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नभए मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले प्रारम्भमै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए।
सर्वोच्चको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइमा विपक्षीसँग लिखित जवाफसमेत माग नगरी संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो। एकल इजलासलाई कुनै निर्णयमा संवैधानिक वा कानुनी त्रुटि रहेको भन्ने लागे प्रथम दृष्टिमै अन्तरिम आदेश दिन सक्छ।